Editorial Archives - News @ M-Media
ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၇ . မည်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမဆို ပြည်သူတို့အကြား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆန္ဒအလျောက် ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးမှုအရ အများစု၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတို့ကို လေးစားလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်[Read More…]
January 30, 2017 — EDITORIAL
ဇူလိုင် ၁၈ ၊ ၂၀၁၅ M-Media . အာဇာနည်ဆိုတာ နှလုံးသားလှသူတွေပါ။ မိသားစုအတွက်၊ ရပ်ရွာဒေသအတွက်၊ တိုင်းပြည် အတွက်၊ ဘာသာသာသနာအတွက်၊ မိမိလူမျိုးလွတ်မြောက်ရေး၊ တိုးတက်ကောင်းစားရေးအတွက် စသဖြင့် အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ[Read More…]
July 18, 2015 — EDITORIAL
မေ ၂၅ ၊ ၂၀၁၅ M-Media စကတည်းက ယဉ်သကို ဆိုတာလိုပါပဲ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အဖြစ်က အသေ၀နာစ ဗာလာနံဆိုပြီး လူ့ဗာလတွေနဲ့ကင်းဝေးစေဖို့ ဒီမိုကရေစီဂါထာစီးဖြန်း မန်းမှုတ်လာခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ကံဆိုးချင်တော့ ဗွီလိန် က မင်းသားဝတ်စုံပြောင်းပြီး[Read More…]
May 25, 2015 — EDITORIAL
မြန်မာကို အညံ့ခံသွားတဲ့ လီကွမ်ယု (Editorial)
ဧပြီ ၃ ၊ ၂၀၁၅ M-Media ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ဗိသုကာကြီးလီကွမ်ယုဟာ နမိုးနီးယားရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေအတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်နေ့တစ်နေ့ပါ။ လီကွမ်ယုဟာ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၉၁[Read More…]
April 3, 2015 — EDITORIAL
အနာဂတ်အတွက် ကလေးတွေ တာဝန်ကျေခဲ့ပြီ (Editorial)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၊ ၂၀၁၅ M-Media ၂၀၁၅ ဟာ ခရာဆူးခြုံတွေ၊ နွယ်မြက်ပိတ်ပေါင်းတွေ၊ လျှိုမြောင်ချောက်ကမ်းပါးတွေနဲ့ တောထူလို့။ ၀င်္ကဘာလို မာယာထောင်ချောက်တွေလည်း ပြည့်နှက်လို့။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ သမင်သားငယ်ဟာ ကျားတွေ၊ ၀ံပုလွေတွေ၊ မြေခွေးတွေကြားမှာ ဘယ်သူ့အစာ[Read More…]
February 18, 2015 — EDITORIAL